New Zealand Doorashada Calankeeda
Bibi-Khanym, 23 Mar 2014 (Alldhooftinle.com)
Dadka Reer New Zealand Ayaa Dhowaan U Codeyn Doona Inay Bedelaan Calankooda Iyo In Kale.
Dadka reer New Zealand ayaa dhowaan u codeyn doona inay bedelaan calankooda iyo in kale. Dad badan ayaa u arka in calanku weli yahay astaantii gumaysiga Ingiriiska. Calanka New Zealand ayaa geeska sare ee bidixda waxaa kaga yaala calaamada midawga Ingiriiska, taasoo muujinaysa in aanay New Zealand weli ka bixin xayndaabka Ingiriiska.
Raiisul wasaaraha dalkaas John Key ayaa balan qaaday in hadii mar sadexaad la doorto bisha Sebtember uu qaban doono afti dadka lagu weydiiyo in calanka la bedelo iyo in kale. Mucaaradka ayaa iyaguna balan qaaday inay afti u qaadi doonaan calanka hadii ay xukunka ka tuuraan raiisul wasaare John Key. Dadka aadka u jecel in la bedelo ayaa ku doodaya in calanku u eg yahay kan Australia sidaa darteedna uu meesha ka saarayo madaxbanaanida dalka.
Laakiin dadku lama wada dhacsana bedelaada calanka, gaar ahaan ciidamadii soo dagaalamay ma rabaan inay arkaan calan kale oo New Zealand yeelato. Waxaase lays weydiinayaa waxa lagu bedelayo. Mr. Key ayaa qaba in calanka laga dhigo calaamada ay isticmaalaan kooxda Ciyaarta Rugby u ciyaarta New Zealand oo ka kooban midabada qalinka iyo madowga, taasoo dad badani diidan yihiin, ayna sheegayaan in wadankoo dhami aanu ciyaartooy ahayn. Dad kale ayaa iyaguna qaba in calan kasta oo New zealand yeelanayso lagu muujiyo dadka dhulka loogu yimi ee loo yaqaan Maori.
Dalka Kanada ayaa sanadkii 1965kii iska bedelay calankii ku xidhayey Ingiriiska, waxayna doorteen calanka caleenta leh, waana ta hada dad badan oo reer New Zealand ah ay tusaalaha u soo qaataan. New Zealand ayaa u muuqata inay si tartiib tartiib ah uga sii durkayso Ingiriiska, iyagoo sanadkii 2004 ku bedelay maxkamadii Ingiriiska ee xukunka kama danbayska qaadi jirtey mid ay iyagu leeyihiin.
Timur Bin Jacfar AlMakhzuumi